Intlawulo enyanzelekileyo: Ukuvuma okanye ukungavumelani? | Law & More BV
Blog » Intlawulo enyanzelekileyo: Ukuvuma okanye ukungavumelani?
Umntu onetyala ongasakwaziyo ukuhlawula amatyala akhe angekahlawulwa unokukhetha ezimbalwa. Unokwenza ifayile yakhe ukubhengezwa okanye wenze isicelo sokwamkelwa kumalungiselelo ohlengahlengiso lwetyala ngokusemthethweni. Umboleki-mali unokufaka isicelo sokutshatyalaliswa komntu onetyala. Phambi kokuba kungeniswe umntu onetyala kwi-WSNP (i-Natural Persons yaMatyala oLungiso loMthetho), kuyakufuneka enze inkqubo yoxolo. Kule nkqubo, kwenziwa iinzame zokuba kufikelelwe kwisivumelwano ngoxolo nabo bonke ababolekisi. Ukuba omnye okanye abangaphezulu kubatyalwayo abavumi, umntu onetyala angacela inkundla ukuba inyanzelise abo bangavumanga ukuba baboleke imali ukuba bavumelane ngentlawulo.
Intlawulo enyanzelekileyo ilawulwa kwinqaku lama-287a. Umboleki-mali makangenise isicelo sesoluleko esinyanzelekileyo kwinkundla ngaxeshanye nesicelo sokwamkelwa kwi-WSNP. Emva koko, bonke abatyali abalayo bayabizelwa kwindlebe. Ungathumela isibheno esibhaliweyo okanye ungabeka phambi kokuzithethelela ngexesha lokuxoxwa kwetyala. Inkundla iya kuvavanya ukuba ingaba ubunokwala ngokufanelekileyo na ukusonjululwa ngoxolo. Ukungalingani phakathi kwenzala yakho yokwala kunye nemidla yetyala okanye abanye ababolekisi abachaphazelekayo ngokwala kwakho kuya kuthathelwa ingqalelo. Ukuba inkundla inoluvo lokuba ubungenokwala ngokufanelekileyo ukuvuma amalungiselelo okuhlawulwa kwetyala, isicelo sokunyanzeliswa kwetyala lonke siya kunikwa. Uya kuthi emva koko uvume kwintlawulo leyo uyinikiweyo kwaye ke kuya kufuneka uyamkele intlawulo yenxalenye yebango lakho. Ukongeza, njengomntu ongalamkeliyo owalayo, uya kuyalelwa ukuba uhlawule iindleko zenkqubo. Ukuba ukuhlawulwa kwesinyanzelo akunyanzelwanga, kuya kuvavanywa ukuba ingaba umntu onetyala angamnkelwa na kulwakhiwo ngokutsha lwetyala, ubuncinci ukuba umtyali ugcina isicelo.
Ngaba kuya kufuneka uvume njengomntu obolekayo?
Indawo yokuqala kukuba unelungelo lokuhlawulwa ngokupheleleyo ibango lakho. Ke ngoko, ngokusisiseko, awunyanzelekanga ukuba uvume kwintlawulo encinci okanye ulungiselelo (loxolo) lwentlawulo.
Inkundla iyakuthathela ingqalelo iimeko ezahlukeneyo kunye neemeko xa iqwalasela isicelo. Ijaji iya kuhlala ivavanya le miba ilandelayo:
isindululo sibhalwe kakuhle kwaye sithembekile;
isindululo sokuhlengahlengiswa kwetyala savavanywa ngumbutho ozimeleyo noyingcali (umz. ibhanki yamatyala kamasipala);
kuye kwacaciswa ngokwaneleyo ukuba isithembiso eso sigqithise kangangokuba umntu otyalayo makathathwe njengonemali.
enye indlela yokuhlawula amatyala okanye yokuhlengahlengiswa kwetyala lakho inika ithemba kulowo unetyala;
Olunye uhlobo lokungabinamali okanye uhlengahlengiso lwetyala unika ithemba kulowo ubolekayo: kungenzeka njani ukuba owalayo ongayamkeliyo afumane isixa esifanayo okanye ngaphezulu?
kusenokwenzeka ukuba intsebenziswano yokunyanzelwa kulungiselelo lokuhlawulwa kwetyala igqwetha ukhuphiswano kulowo ubolekayo;
kukho umzekelo wamatyala afanayo;
buyintoni ubuzaza bomdla wemali ebolekayo ngokuthobela ngokupheleleyo;
Leliphi inani lamatyala lilonke elibalwa ngumntu ongalamkeliyo otyalwayo;
umboleki-mali owalayo uyokuma yedwa ecaleni kwabanye ababolekisi bevuma ukuhlawulwa kwetyala;
bekukho uxoliso ngoxolo okanye ngokunyanzelwa ukuhlawulwa kwamatyala okungazange kwenziwe ngendlela eyiyo. 
Umzekelo unikiwe apha ukucacisa indlela ijaji ewavavanya ngayo loo matyala. Kwityala eliphambi kweNkundla yezibheno eDen Bosch , kuthathelwe ingqalelo ukuba isithembiso esenziwe ngulowo utyalwayo kwabo abatyalayo phantsi kwesivumelwano soxolo asinakuthathwa njengesibaxekileyo nekulindeleke ukuba abe nakho ukwenza imali . Kwakubalulekile ukuqaphela ukuba umntu onetyala wayesemncinci (iminyaka engama-25) kwaye, ngokuyinxenye ngenxa yelo xesha, ngokomgaqo, wayenamandla aphezulu okufumana. Iya kuba nakho ukugqibezela ukubekwa emsebenzini okwethutyana. Kwimeko enjalo, bekulindeleke ukuba umntu onetyala akwazi ukufumana umsebenzi ohlawulelwayo. Okona kulindelweyo kwingqesho akubandakanywanga kulungiselelo lokuhlawulwa kwetyala. Ngenxa yoko, khange kubenakho ukumiselwa ngokufanelekileyo ukuba loluphi uhlobo lohlengahlengiso lwetyala elisemthethweni oluza kunika ngokweziphumo. Ngaphaya koko, ityala lomntu owalayo ukwala, i-DUO, lijongene nenxalenye enkulu yetyala lilonke. Inkundla yesibheno yayinoluvo lokuba i-DUO inokwala ngokufanelekileyo ukuvuma ukuvumelana ngoxolo.
Lo mzekelo wenzelwe iinjongo zomzekeliso kuphela. Kwakukho nezinye iimeko ezazibandakanyekile. Nokuba umntu obolekayo angala ukuvuma ukuhlala ngoxolo kuyahluka kwimeko ngeemeko. Kuxhomekeka kwiinyani ezithile kunye neemeko. Ngaba ujongene nokuhlaliswa ngokunyanzelekileyo? Nceda unxibelelane nelinye lamagqwetha Law & More. Banokukuzamela ukuzikhusela kwaye bakuncede ngexesha lokuxoxwa kwetyala.
 Inkundla yezibheno 's-Hertogenbosch 9 Julayi 2020, ECLI: NL: GHSHE: 2020: 2101.
 Inkundla yezibheno 's-Hertogenbosch 12 Epreli 2018, ECLI: NL: GHSHE: 2018: 1583.
Post edlulileyo Ingxabano yeTequila
Post Next Uxanduva kumqeshi nakumqeshwa ngokoMthetho weeMeko zokuSebenza